Lany 3ora isan'andro amin'ity fitohanana eto Antananarivo Renivohitra ity, miteraka fantiantoka any amin'ny 500 000 olona x 3ora x 2000 ariary (Karama isan'ora raha mandray karama salan'isa 300 000 ariary isam-bolana)= 3 miliara ariary/ isan'andro = 3 miliara ar x 20 andro = 60 miliara ariary isam-bolana = 720 miliara isan-taona, ny fatiantoka ara-toekarena.
Ambonin'izany ny vola lany amin'ny fanamboarana fiarakodia vokatry ny haratsian-dalana, sy ny solika lany amin'ny fiara mihodina 3 ora isan'andro anatin'ny fitohanana(1h30 mandroso ary 1h30 miverina mody). Vinaniana ahatratra any amin'ny 1000 miliara ariary any izany ny fatiantoka ara-toekarena eto an-drenivohitra fotsiny (1/5 n'ny tetibolam-pirenena ny fatiantoka)
Tsy misy magie ny fanalana embouteillage eto Antananarivo Renivohitra, mila fanovana tsy maintsy atao.
- Amboarina ny lalana, mba hikoriana tsara ny fiara (Hetra 6 volana azo avy amin'ny solika dia vita ny lalana 200km eto Antananarivo), amboarina ireo rocade na route circulaire, ahafahan'ny fiara tsy hiditra ampovoan-tanàna handalovany fotsiny;
- Amboarina ny trottoir andehanan'ny olona, amboarina ny Tsena hivarotan'ny mpivarotra, tsy misy "zahay madinika eo", mila manaja ny fandaminana ao anatin'ny fifampiresahana;
- Apetraka ny échangeur asolo ireny rond-point ireny, ny fifanenan'ny fiara anaty rond-point no mampitombo ny fitohanana, fa raha ny iray eo ambony, ny iray eo ambany, dia samy mikoriana amin'ny lalany. Echangeur 10 ihany no atao eto an-drenivohitra, dia milamina ny fifamoivoizana, tsy mandany 300 miliara ariary ny manao izay rehetra izay (Mbola ampahatelon'ilay 1000 miliara ariary fatiantoka ara-toekarena vokatry ny fitohanana);
- Mila politika fanavaozana ireo fiara efa antitra, toy ny bonus malus, esorina ny hetra amin'ny fividianana fiara madio sy vaovao ary asiana fanampiana ara-bola, tataovana hetra kosa ireo fiara tranainy sy mandoto ny tontolo iainana, ka ny vola azo amin'iny no anampiana ireo mividy fiara madio sy vaovao;
- Avaozina sy hatsaraina ny fiara fitaterana, avondrona ireo kaoperativa mba tsy ho lasa fifaninana ary apetraka ora raikitra ny fandalovan'ny fiara mpitatitra isaky ny arrêt iray. Régie de Transport izany no atao, fa tsy kaoperativa mifaninana.
Na ny fiara dia hitovitovy, anamora ny vidin'ny kojakoja vidiana izany, ny garage hanamboarana ny fiara misy fanaraha-maso, ny saofera sy resevera ho voahofana, izay tsy mendrika dia voaroaka sy voasazy. Tsy mendrika ny mponin'Antananarivo Renivohitra intsony ny seza volamena sy ny seza hazo amin'ny fitateram-bahoaka;
- Asiana fiara manokana fitaterana mpianatra tsy andoavam-bola.
- Asiana carte électronique, na smartphone na application ampiasaina amin'ny fitaterana, ka na ny tompon'ny fiara, na ny sofera na ny resevera dia tsy hisy angalatra versement, ny hetra ihany koa avy dia miala ho azy. Tsy voatery hisy connexion io, fa hariva mody ny fiara dia hita ny vola maty indray andro. Na ny mpangaro-paosy hiala maina satria tsy misy vola kirakiraina firy, tsy misy ny adino famerim-bola sy fijaliana mitady vola madinika.
- Na mety lavitrezaka dia efa eritreretina ny fanaovana tramway mampitohy ireo arrondissement, indrindra ny faritra iva. Ireo orin'asa hanao ny tramway no miantoka ny herin'aratra amin'izany, efa hita aty Afrika izany fa tsy zava-baovao. Azo atao ny manorina orinasa Malagasy handraisan'ny rehetra anjara ara-bola amin'izany;
- Asiana parking ho an'ireo fiara, na souterrain, na aérien isaky ny faritra ilana izany, sady mampilamina ny tanàna no hisy fandriam-pahalemana. Azo atao ny manorina Régie na orinasa hitambarana andraisan'ny rehetra anjara ara-bola, izany hoe ny olon-tsotra dia afaka manana petra-bola ao amin'ny orinasa miaraka amin'ny CUA na ny fanjakana foibe, na ireo mpamatsy vola lehibe;
- Asiana lalany ny moto, ny bisikileta, ny bus, ny taxi, ny ambulance, ary ny polisy sy pompier;
- Asiana feu rouge ny tanàna, antsoina ny polytech ametraka ireny;
- Asiana panneau de signalisation;
- Apetraka ny camera de surveillance, sady hampihena ny tsy fandriam-pahalemena, fa ahitana ny fitohanana, ka andrindrana ny feu rouge sy ny "panneau d'information en temps réel".
- Ampirehetina avokoa ny jiro anazava ny arabe sy ny trottoir ary ny lalan-kely rehetra.
Mipetraka foana hoe aiza ny vola anaovana izany?
Rehefa apetraka tsara ny fandrindrana ny hetra, ny fitsinjaram-pahefana dia samy tompon'andraikitra ny rehetra. Omeo ny Kaominina tanteraka ny andraikitra fa tsy hitsabahan'ny fitondrana foibe, tsy subvention na fanampiana no ilaina, fa décentralisation et autonomie budgétaire.
Ny hetra azo avy amin'ny vidin'ny solika dia 29% isaky ny litatra, izany hoe isaky ny maka solika 1 lititra isika dia 1000 ariary amin'iny dia hetra, ka tokony omena ny Kaominina na CUA iny anamboarana sy hikojakojana ny lalana. Foanana io fifandirana lalana nasionaly, sy lalana kaominaly io. Avelao ny CUA hiandraikitra tanteraka ny Kaominina misy azy, eny na ny fanalana fako aza, fa tsy hidiran'ny ministeran'ny rano, ka hifanjanana sy hifamotehana ara-politika avy eo.
Ny orinasa rehetra dia mandoa 30% hetra, ankoatran'ny TVA 20%, ka tokony ahazo amin'izay ihany koa ny Kaominina misy ilay orin'asa.
Mba azontsika an-tsaina ve fa ny mpivarotra rehetra eo ambodin'Isotry, ry Carlton, ny hopitaly sy administration rehetra eo Ampefiloha, ny Cnaps, ny Shoprite, ny Fiaro, ny radio sy Télé nasionaly,... ireo dia tsy misy vola miditra amin'ny Fokotany Ampefiloha na ariary aza.
Tsy tokony atao sorona politika intsony ny Renivohim-pirenena, ka ho famaharana ho fakana na fandrodanana fanjakana fotsiny.
Ampy izay nihafian'ny mponin'Antananarivo izay, mendrika Renivohitra moderina amin'izay ny Tanànan'Antananarivo, izay fitaratra ahitan'izao tontolo izao an'i Madagasikara. Hita eto avokoa ny Malagasy rehetra, na avy aiza izy na avy aiza, na foko inona na foko inona, na finoana inona na finoana inona, sy ireo vahiny rehetra monina eto.
Tsy an'antokon'olona irery izany ity Renivohitra ity fa an'ny Malagasy tsy ankanavaka. Tsy fananan'antoko politika ihany koa ny Renivohim-pirenena ka hifandrohitan'ny antoko politika samihafa ho lasa fananany.
Ny firenen-dehibe rehetra dia mihodina 24/24ora ny toekaren'ny Renivohitra, fa ny eto amintsika irery no 8ora no misy fandraharahana, lany amin'ny fitohanana ny 4 ora n'ny maraina, ary tsy maintsy matory ny toekarena ny 8 ora alina noho ny tsy fandriam-pahalemena, raha tokony andeha restaurant sy toeram-pamalifaliana sy fitsangatsanganana ny olona na ny mpizaha-tany ny alina.
Renivohitra numérique, miaraka amin'ny borne wifi gratuit isaky ny quartier sy faritra ilana izany no tanjona, lavitry ny fitohanana fiarakodia, ny loto ateraky ny setroka sy ny fako, maha te honina amin'ny fisian'ny zava-maniry maitso, faritra azo hipetrapetrahana, zaridaina madio, WC public madio sy maro, fandriam-pahalemana manerana ny Renivohitra, na andro na alina.
Sary Tracé Tramway